Xisaabi heerka barafka: arrimaha deegaanka iyo dhinacyada | Saadaasha Shabakadda
Xisaabi heerka barafka
Mid ka mid ah arrimaha muhiimka ah markay tahay saadaalinta cimilada waa ogaanshaha dhererka uu barafku soo muuqan doono. Tan waxaa loo yaqaan xisaabi heerka barafka. Muuqaalka biyaha wejiga adag xilliga roobka kaliya ma saameynayo dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha iyo bay'adaha nugul, laakiin sidoo kale nooc kasta oo hawl maalmeed ah.
Qodobkaan waxaan ku bari doonaa sida loo xisaabiyo heerka barafka iyo sida ay muhiimka u tahay.
1 Xisaabi heerka barafka
2 Dhererka iyo heerkulka
3 Heerkulka si loo xisaabiyo heerka barafka
4 Qoyaan, dhibic dharab iyo buuro
Markuu roobku ku yimaado qaab adag, wuxuu saameeyaa tiro badan oo ka mid ah waxqabadyada aadanaha. Waxaa jira deegaanno aad u nugul sida waa taraafikada waddada iyo hawada, waxqabadyada bannaanka iyo waxqabadyada socodka buuraha. Ku dhowaad waxqabad kasta oo nolol maalmeed iyo nolosha magaalooyinka waaweyn waxaa saameyn kara baraf. Farqiga u dhexeeya heerka barafka oo ah 200 mitir wuxuu macnaheedu noqon karaa farqiga u dhexeeya maalin roobaadka iyo burburka magaalada oo dhan baraf dartiis. Waa inaad la qabsataa magaalooyinka ay barafku ku badan yihiin marka aad u diyaar garoobeyso dhacdadan iyo halista ka dhalan karta.
Waan ognahay in heer kulka uu door muhiim ah ka ciyaarayo marka ay timaado noocyada kala duwan ee roobka. Barafku wuxuu u badan yahay inuu dhaco marka cufnaanta hawadu leedahay heerkul waxoogaa ka hooseeya 0 darajo ama dhow. Maskaxda ku hay in heerkulkan kaladuwan ay tahay inuu ka jiro dusha meesha aan joogno. Markii aan eegno heerkulka cufnaanta hawada, waxaan helnaa qiyaas ah, xaaladaha badankood, waxaa laga yaabaa inaysan ku filnayn. Waa deg deg markaan ogaano taas waxaa jira arrimo kale oo keeni kara khaladaad marka la xisaabinayo heerka barafka dhibaatooyinkuna yimaaddaan. Dhibaatooyinka ka dhashay samaynta saadaasha hawada.
Dhererka iyo heerkulka
Dhererka iyo kuleylka ayaa ah meelaha ugu horeeya ee badiyaa la ilaaliyo si loo xisaabiyo heerka barafka. Waa mid ka mid ah arrimaha ugu horreeya ee ina siinaya tilmaam ku saabsan heerka sare ee barafka uu yeelan karo. Heerkulka '0 degree' waa xariiqda heer kulkaas lagu hayo isla dhererka. Taasi waa, dhererka uu heer kulka ka xun yahay xaaladaha caadiga ah. Caadi ahaan, Soo noqoshada kuleylka ah kuma dhacdo lakabyada sare, laakiin sidoo kale way dhici kartaa. Barafka guud ahaan wuxuu bilaabaa inuu ku dhalaaliyo heerkan. Waa wax iska caadi ah in barafka ugu horreeya ee aan helno ay dhawr boqol oo mitir ka hooseeyaan isotomaamka. Meelahan waxaan ku leenahay heerkul leh qiyam waxoogaa togan oo ka sarreeya 0 darajo.
Halbeegga kale ee badanaa la arko waa heerkulka cadaadiska 850 hPa. Waxay ku saabsan tahay a qiimaha cadaadiska cimilada oo sida caadiga ah qiyaastii ah 1450 mitir oo sare. Faa'iidada adeegsiga nidaamkan tixraaca si loo ilaaliyo heerkulka miisaanka hawadu waa inay aad uga badan tahay matalaadda heerkulka ka jira heerarka hoose. Faa'iidada kale ee nidaamka tixraaca noocan ah ayaa ah in si ku filan looga soocay dhulka sidaa darteed kala duwanaanta dhulka, shucaaca qorraxda iyo wareegyada maalin iyo habeen aysan faragelin heerkulka. Thanks to xuduudahan waxaa suurtagal ah in la xisaabiyo heerka barafka aad uga fudud.
Heerkulka si loo xisaabiyo heerka barafka
Shaki la'aan, heer kulka ayaa ah midka ugu muhiimsan ee isbeddelada deegaanka ee xisaabinta heerka barafka. Falanqaynta kaliya heerkulka heerarka ugu hooseeya, waa la arki karaa haddii aan sii wadno in si sax ah loo xisaabiyo heerka barafka. Heerkul isku mid ah heerarka hoose, heerka barafka wuu kala duwanaan karaa. Sababta kala duwanaanshahan waxaa sabab u ah qiimaha heerkulka ee aan ka helno lakabyo sare. Waxa ugu caansan ayaa ah in dhammaan sawir gacmeedyada iyo miisaska hagidda ee lagu xisaabiyo heerka barafka badanaa lagu daro heerkulka illaa 500 hPa ee cadaadiska cimilada. Cadaadiska noocan ah waxaan isku aragnaa meelaha ugu sarreeya qiyaastii 5500 mitir oo ka sarreeya heerka badda.
Haddii aan ka helno jawi qabow dhexdhexaad iyo lakabyo sare, waxaa jira kor u kac iyo hoos u dhac hawadeed oo sababi kara hoos u dhaca heerkulka. Haddii aan helno roobab soo noqnoqda oo ka dhaca goobahan, waxaa jiri doona hoos u dhac weyn oo ku yimaada heerka barafka. Faracgan lama filaanka ah badanaa wuxuu ka dhigan yahay dhowr boqol oo mitir ka hooseeya sidii la filayay. Kiiska ugu daran ee badanaa la helo waa goorma hawadu waa qabow ku filan oo dhererkeedu ma xasillooni waxayna sababi kartaa isku xirnaan qoto dheer iyo duufaanno. Waxay ku jirtaa xaaladahaas daran markii heerka barafka uu hoos ugu dhici karo in ka badan 500 mitir. Halkan waxay badanaa faragelisaa qubeyska waxayna u horseedi doontaa baraf daran oo daran oo lama filaan ah.
Kiisaskaasi badanaa waxay dhacaan xilliyada yar-yar ee xilliga qaboobaha iyo meelaha aanu sida badan barafku ka dhicin, laakiin sannad walba waa baraf. Cadaadiska 850 iyo 500 hPa sinnaba looma dejin qiimayaal. Meelaha leh cadaadis sare iyo jiyootiko sare waxaan ka heli karnaa barafka kor. Dhanka kale, sidoo kale waxaa laga heli karaa niyad jab waa inay tahay mid aad u qabow oo qoto dheer tan iyo markii ay ku dhacdo hoos u dhacyo kala duwan oo ka mid ah meelaha loo yaqaan 'troposphere' kuwaas oo leh dhul-goosad aad u hooseeya. Waa halkan halka aan ka heli karno qiimayaasha cadaadiska ee 850 hPa oo kaliya mitirka 1000 ee sare.
Si barafku uga jiro meelahaas, waa inuu jiraa heer kul heer sare ah 0 darajo oo leh cadaadiskan jawiga iyo juquraafi ahaan 1000 mitir.
Qoyaan, dhibic dharab iyo buuro
3-daas qodob waa qodobo na shardi doona marka la xisaabinayo heerka barafka. Qoyaanku waa qaboojiye aad u fiican. Meelaha leh qoyaan badan, baraf barafku si dhakhso ah ayuu u dhalaalaa oo 200 mitir uun buu ka hooseeyaa 0 heerkulka hoose Sidaa darteed, aagaggaas roobabku badanaa waa roob. Marka lakab hawo qalalan ka muuqdo aag u dhow dusha sare, barafleyda ayaa dayactiri kara qaabdhismeedkooda iyadoo ay adag tahay in wax dhalaasho ay sii dheeraato. Haddii huurku aad u hooseeyo heer kulkiisuna wanaagsan yahay, filim biyo ah ayaa hubaal bilaabi doona inuu ka soo baxo dusha barafleyda. Haddii huurku aad u hooseeyo, biyuhu waxay bilaabayaan inay sameeyaan, iyagoo ka qaadanaya tamarta jirka laftiisa iyo hareeraha hawada.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto dhinacyada ay tahay in lagu xisaabtamo si loo xisaabiyo heerka barafka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Xisaabi heerka barafka